Somaliland: Khudbada Madaxweynaha 29-Guurada 18May | #1Araweelo News Network
Somaliland: Khudbada Madaxweynaha 29-Guurada 18May
Hargeysa(ANN)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, ayaa ka hadlay munaasibad kooban oo loo qabtay xuska 29-guuradii Somaliland oo lagu qabtay maanta Miiska Saraakiisha ee Hargeysa.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi oo ka hadlay 29 guuradii 18 May oo ku beegan 18 May 25 Ramadaan.
1. Maalinta 18-ka May
2. Xanuunka Coronavirus (COVID-19)
Dawladdu waxay qiimo dhimis cashuureed oo dhan 20% ku samaysay cashuurta soo dajinta ee raashinka bisha Rammadaan.
Dawladdu waxa ay abuurtay Sanduuqa Miskiin-kalkaal oo lagu uruurinayo qaadhaan lagu taakuleeyo Dan-yarta uu noloshooda saameeyey xanuunka COVID-19, waxaanay Dawladdu ku shubtay Sanduuqaasi $1 Milyan oo Doollar.
3. Amniga Qaranka
Colaadaha beelaysan ee soo noq-noqda iyo khilaafaadka beelaha ee ka dhasha waxaan sakaaro ka biirsan, waxa ay Qaranka ku joogaan qiime iyo khasaare aad u sarreeya, waxaanay labadii sanno ee ugu dambeeyey xallintoodu ugu fadhidaa Qaranka qiime lacageed oo gaadhaya $9 Milyan oo Doollar. Waa lacag ku filan in ay innoo dhisto dugsiyo, cisbitaal casri ah iyo waddooyin intaba.
5. Kaabayaasha Dhaqaalaha
6. Adeega Bulshada
Waxa cudurada faafa laga tallaalay caruur tiradoodu gaadhayso 1.4 Milyan caruur ah oo da’doodu ka hoosayso shan jir, sannadkan iyo sannadkii hore.
Waxa 85% la dhammaystiray faylashii dacwadaha ku soo xerooday Maxkamaha dalka sannadkii 2019-ka.
8. Shaqo Abuurka Dhallinyarada
9. Beesha Caalamka iyo Dalalka Deriska
10. Gar-gaarka Caalamiga ah
Xukuumadda Somaliland waxa ay uga digaysaa Hay’addaha Caalamiga ah iyo Kuwa Qaramada Midoobay in ay gar-gaarka Beesha Caalamku ugu talo-gashay Somaliland isku dayaan in ay soo mariyaan Soomaaliya. Waxa ka yaalla Sharci, waxaanay meel ka dhac ku tahay Qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland, waxaana laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan.
11. Wada-hadallada Jamhuuriyadda Somaliland iyo Soomaaliya